Kazakhstan: Ny Krizy Ara-Toekarena Sy Ireo Vokany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2018 2:40 GMT
Ho tohin'ny krizy malefaka ara-toekarena sy ara-bola, izay naleon'ny governamanta nantsoia hoe “fanitsiana ny tsena”, tohizan'ireo bilaogera ny miady hevitra mikasika ireo vokany.
Milaza i Sarimov fa nahemotra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny Zaikabe isantaona fanaon'ireo Mpikirakira ny ara-bola ao Kazakhstan. Nohazavain'i M. Saidenov, filohan'ny Banky Nasionaly, fa “nanome toro-marika ho anay ny filoham-pirenena, noho izany mazava ny toe-draharaha, ary mazava ihany koa ireo andraikitra nankinina tamin'ny sehatry ny banky. Tsy ilàna adihevitra”, hoy ny filazany. Mitarika ahiahy ho an'ilay blaogera ny fisarihana hanilika ireo adihevitra. “Matahotra izy ireo”, hoy ny heviny, amin'ny fanombatombanana fa mety azo eritreretina ny hisian'ny karazana fanavakavahana ara-politika amin'ny taona ho avy.
Syndikator misaintsaina mikasika ny fanamarihana mazava ataon'ny governemanta fa voakajy ho 40 isanjaton'ny vidim-piainana ny “fetra farany ambonin'ny fahantràna”. “Raha ny fahitako azy, raha toa aho tsy mahavita mahazo io 40 isanjato io amin'ny karama ivelomana, dia tsy ho tafavoaka velona mihitsy. Saingy vitako ny mba nahazo ny, ndeha atao hoe, 43%, tsy azo kilasiana ho toy ny olona mahantra aho. Dura lex… “
Mandritra izany fotoana izany, manontany tena ny Wondernews hoe inona avy ireo fototry ny krizy farany niainan'ny sehatry ny fanorenana tao Kazakhstan. Nihaino ny iray tamin'ireo porofo voarara izy – fipaingorana ireo fifanakalozan-dresaka an-telefonina izay mitranga mitsitapitapy ety amin'ny vohikala – ilay iray nahenoana mpiasam-panjakana “manangona” vola ho an'ny fampielezankevitry ny antoko eo amin'ny fitondrana nandritra ireo fifidianana solombavambahoaka ny volana aogositra 2007. Anisany tamin'ireo orinasa “nanome” vola dia ireo orinasa roa voalohany misahana fanorenana ao amin'ny firenena. “Angamba mety ho izay ve no antony nahatonga ny fatiantoka teo amin'ny tsena fampindramambola?” manontany somary mandrangitra izy.
Manadihady olana iray hafa i Xxrock – ny famaizana nataon'ny governemanta ny fanorenana ireo trano mihaja tsy ara-dalàna tao amin'ny kianja nasionaly manakaiky ny tananàn'i Kazakhstan – Almaty. “Tsiambaratelo misokatra ny famintinana mikasika ny kolikoly ao amin'ireo fitantanana ny tanàna. Misy olana mbola tena mahaliana kokoa – ireo zavamitranga rehetra [rehefa nomena an'ireo mpiasam-panjakana ambony ny tany] dia mampiseho fanitsakitsahana ny lalàna ary tsy maintsy ho henjehin'ny lalàna. Saingy ireo mpiasam-panjakana izay loza mitatao ho an'ny rafi-pitondrana mpitsitokotoko ihany no azo entina eo amin'ny fitsaràna ao Kazakhstan”, hoy izy, manondro ilay fanapahankevitr'ireo mpampanoa làlana mba tsy hameno antontan-taratasin-keloka hanenjehana ireny mpangalatra ireny.
Tsy sasatra mihitsy i Steve LeVine mampiseho ireo firoboboana eo amin'ny sehatry ny solika an'ireo fanjakana Caspian, anisan'izany i Kazakhstan. Mitatitra izy fa ny orinasa vaovao iray an'i Chevron sy ExxonMobil dia porofon'ny fisarihana mitontongana avy amin'ireo orinasa goavana mpamokatra solika ao Kazakhastan: “Taorian'ireo taona maro nisehosehoana ho màzana tao amin'ny ranomasimben'i Caspienne, nifandona ireo orinasa roa ary nandoa 309 tapitrisa dolara tamin'ny firenena ho onitra mikasika ny tontolo iainana”, hoy izy. Ankoatr'izay, manamafy izy fa i Eni an'i Italia, nifampiraharaha tamin'ny anaran'ireo orinasa goavana marobe mpitrandraka solika erantany niaraka tamin'i Kazakhstan, dia hanandrana hanome fahafahampo amin'ireo fitakian'ny governemanta ary hiroso amin'ny fampiroboroboana ny Kashagan, ilay goavana mpamokatra solika izay voasazy.
Fanamarihana: Ny rohy rehetra dia mitarika amin'ireo lahatsoratra aamin'ny teny Rosiana, afa-tsy ny blaogin'i Steve LeVine